ဂဇက်လိ(ခ), ဟောင်ကောင်မှ ဟင်းစပ်များ – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ဂဇက်လိ(ခ), ဟောင်ကောင်မှ ဟင်းစပ်များ – KZ’s ထမင်းဆိုင်
ဂဇက်လိ(ခ), ဟောင်ကောင်မှ ဟင်းစပ်များ – KZ’s ထမင်းဆိုင်
Posted by ဇီဇီ on Feb 17, 2014 in Food, Drink & Recipes | 65 comments
ဂဇက် လိ(ခ) ကွ။
နာ့ ကို ဟင်းစပ်မပေးပဲ တူ့ ရှစ်တူကိုပဲ ဟင်းချက်ချက်ကျွေးနေတဲ့ လူဂျီးးးးး
ခု သူ့ ချစ်ချစ် ဆီ က ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဟင်းစပ်တွေ တင်တယ်ကွာ။
ချက်နည်းသိချင်ရင် ဒီလူဂျီးကို မေးကြပါကုန်။
၀က်နံရိုး နုနုချက် ၊
အသီးအရွက်ကြော်ရင် အနူးမလွယ်တာကို အရင်ကြော်ပါတယ်…
ဆီအတော်ပူမှ ဂေါ်ရခါးသီးနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကိုထည့် ၊ နူးလောက်ပြီဆိုမှ မုန်လာဥနီနဲ့ ခရုဆီထည့်ပြီးကြော်ပါတယ် ။ သဘာဝအချိုမို့ အချိုမှုန့် အသားမှုန့် ဘာမှမထည့်ပါဘူး ။
မှိုဟင်းခါးကတော့ ရေဆူဆူမှာ သကာရည်နဲ့စပ်ထားတဲ့ Soup Base ၊ ပင်အပ်မှို ၊ ကြက်သွန်ဖြူဓားပြားရိုက် ၊ ဓားနဲ့မွှန်းထားတဲ့ ငရုပ်သီးစိမ်း ၊ ငရုပ်ကောင်းတွေထည့်ပြီးချက်ထားတဲ့ အလွယ်ဟင်းခါးပါ ။
ငရုတ်ခွဲကြမ်းပဲငါးပိဆီစိမ်ကတော့ တရုတ်ဆိုင်ကဝယ်လာတဲ့ သက်သတ်လွတ်လေ… ။
ညနေက ဝယ်စားတဲ့ ဘဲကင်အကျန်ကို စီမံလိုက်တာပါ…။
အသားနွှင် ၊ အရိုးကို ကြံမဆိုင် ၊ ဂျင်း ၊ ငရုပ်သီးစိမ်းထည့်ပြီး ဟင်းရည်သောက်…။
ကြက်ဥခေါက်ဆွဲခြောက်ကို ရေစိမ်ပြီး အသီးအရွက် အဆာပလာထည့် ဘဲကင်နဲ့ကြော်ပါတယ် ။ ခရုဆီ ၊ သကြား ၊ အသားမှုန့်ထည့်ထားတဲ့ အသီးအရွက်ကြော် ခပ်စိုစိုမှာ ခေါက်ဆွဲခြောက်ရေစိမ် ထည့်ကြော်တော့ ခေါက်ဆွဲလည်းနူး ၊ ရေလည်းခမ်း ၊ အကုန်အရသာရှိတယ်လေ ။ ကြိုက်တတ်ရင် အရွက်ကြော်ထဲကို နှမ်းဆီ ၃စက်လောက်ထည့်ပါ ၊ အရသာလည်းကောင်း ၊ ရနံ့လည်း မွှေးသဗျ…။
အချိုပွဲ..တည်သိး နဲ့ စတော်
ငါးရှဉ့်ကို မဆလာ ရှမ်းနံနံနဲ့ မအုပ်ချင်ရင်… ငါးရှဉ့်ကို ခေါင်းဖြတ် မကျည်းမှည့်နဲ့ အချွဲဆေး ၊ ပြီးရင်အရွယ်တော်တုံး (တုံးပြီးရင် မဆေးနဲ့) ၊ ဆား ၊ နနွင်း ၊ ငန်ပြာရည် ၊ ဟင်းချက်မှုန့်နဲ့ နယ်ပြီး နှပ်ထား ။ မြေပဲဆံအစိမ်းကို ငြုပ်သီးခွဲကြမ်း ၊ ကြက်သွန်ဖြူ/နီ ၊ ဂျင်းမီးကင်နဲ့ ရောထောင်း ၊ ဆီသတ်ပြီးချက်တာပါ ။ အနံ့ပျောက်ပြီး လွန်စွာ ခံတွင်းမြိန်၏…
ဝက်နံရိုးကို ရေဆေးပြီး နာနတ်ပွင့် ၊ သကြားအညို ၊ ဆား ၊ ဂျင်းရည် ၊ ဟင်းချက်ဝိုင်နဲ့ နှပ်ထားတယ် ။ စားမည့်နေ့မှ နူးအောင်ပေါင်း (အမှန်က Slow Cooker နဲ့ ချက်တာ) နူးရင် ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ပဲငါးပိအချိုထည့်… အရည်စပ်စပ်လေးဆို ရပြီ.
ကနေ့တစ်နေ့လုံးစာကကတော့ ခရမ်းသီး မီးဖုတ်သုတ်နဲ့
၀ိုင်နီနဲ့ပေါင်းတဲ့ အချိုမှုန့်မပါ၊အသားမှုန့်မပါ၊ ၀က်ရဲ့အသားနဲ့အရိုး ကထွက်တဲ့ အချိုဓာတ်နဲ့ အဆိမ့်ဓာတ်တွေဝင်နေတဲ့ ပဲပြား၊မှိုချောင်း၊မုန်လာဥတို့ပါတဲ့ လျှာလည်သွားစေတဲ့ ” ကျောက် ၀က်နံရိုးပေါင်း “
လက်၎လုံးလောက် ဝက်နံရိုးတွေကို ဝိုင်နီ ၊ ဂျင်းရည် ၊ သဂျား ၊ ဆား ၊ နာနတ်ပွင့် ၊ ကရဝေးခေါက် ၊ လေးညှင်းပွင့် ၊ ဖာလာစေ့နဲ့ တစ်ညသိပ် နှပ်ထားပြီးမှ Slow Cooker နဲ့ ချက်ထားတာပါ ။ အရင် မုန်လာဥဖြူအတုံးတွေနဲ့ ရေခမ်းအောင်လုံးပြီးမှ ရေစွက်ပြီး အရိုးနူးအောင် ချက်ပါတယ် ။ ကျက်ခါနီးမှ ပဲပြား ၊ မှိုတွေထပ်ဖြည့်လိုက်တော့ ရှယ်ပဲဗျို့…။ ပိုပြီး ခံတွင်းမြိန်အောင် ခရမ်းသီး အလုံးကြီးကြီးကို မီးအုံးပြီး ကျက်သွန်နီ ၊ ပုဇွန်ခြောက် ၊ ငရုပ်သီးစိမ်းပါးပါးလှီးနဲ့ တွဲလိုက်တာ စားလို့ကောင်းမှကောင်း…။
ကနေ့နေ့လယ်စာကတော့ ပိတ်ရက် ၀ိတ်တက်စေအုန်းမယ့်
ညသိပ် ရေစိမ်ထားတဲ့ ကုလားပဲကို နူးအောင်ပြုတ် ၊ ပျဉ်းတော်သိမ်နဲ့ ဆီသတ်ပြီး ချက်ထားတဲ့ ကြက်သားနဲ့ရော ၊ ဟောင်ကောင်ပလာတာ မွမွလေးကို ဆီနဲနဲနဲ့ကြော်ပြီး ဆွဲတာပေါ့ဗျာ ။ အချဉ်သုပ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ ကွက်တိ…။
ကနေ့ နေ့လယ်စာ ဦးကျောက်ရဲ့ အလုံးတွေ(ငါးထမင်းနယ်) ..
ခရမ်းချဉ်သီးကိုပြုတ်ပြီး အခွံသင် ၊ အနှစ်ချ ။ ငါးအသားလွှာကို ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ် ၊ ပဲပုတ်ခြောက် အမှုန့် ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ နနွင်းနဲ့ချက် ။ ထမင်းဖြူကို အာလူးပြုတ် ငါးဟင်းအနှစ်နဲ့နယ် ဂျူးမြစ်ခြောက်ကြော်လေးနဲ့ဆို ကွက်တိ ။ ဟင်းရည်သောက်ကတော့ ပဲရွက်အနုလေးတွေကို ငါးနဲနဲနဲ့ ဟင်းခါးချက်လိုက်တယ်…။
အညွှန်းတွေကို နှင်းနှင်း ဖဘဝေါပေါ်က ယူပါတယ်။
နှလုံးသားဆီကို အစာအိမ်ကနေ ဖြတ်လမ်းရှိတယ်ဆိုတာ သမီး ယုံသထက် ယုံပါပြီ ဖေဖေ။
တူ ၂ ကိုယ် တိုင်းပြည်တွင် စားသောက်နေကြသော ကျောက်(စ) + နှင်းး
Photo Credit: Thaw Thaw
ကျောက်(စ) ရေ။ ဟင်းချက်နည်းလေး လာပြောပေးပါ။
ပုံ တွေပါမြင်ရတော့ ပိုပြီး သွားရည် ကျမိပါကြောင်း…..ဂလု ..
ဒီလူဂျီး ဖွဘုတ်မှာ နှိပ်စက်နေတာကြာပေါ့ မောင်ရယ်။
ဦးလေးကျောက်လက်ရာက တော်တော်နာမည်ကြီးပါပေ့ ။ ။
ခေါင်းစဉ်ကလည်း မိုက်နေရော..ပုံကြီးတွေကြည့်ပြီး သွားရည်တောင် ပြန်ကျလာပြီ နှလုံးသားနဲ့ ချက်ကျွေးတာပါလို့ ပြောရို့ အလွန်စားကောင်းပါတယ်ရို့…ဟင်းတွေမှာ အချိုမှုန့် မသုံးထားကြောင်း အာမခံပါတယ်လို့
ဒီလူဂျီးက နှင်းကို အလှဖျက်နေတာ။
ကြူကြူနှင်း လုပ်နေလား မသိနော့ ..အမယ်လေး မြင်ယောင်ကြည့်ရုံနဲ့ လန့်ထာ
မားမားချွိနဲ့ ……ချစ်တူနဲ့ စားတဲ့ဟင်းဒွေလည်း
မမချွိ ဖွဘုတ်မှာတင်သမျှတွေက မမချွိ စားသမျှပေါ့ကွယ်။
ဒီမှာတင်ရရင် တဂျီး ငိုမစိုးလို့ တင်တော့ဘူးးး
တိန်… စနိုဒန်မယ်ချွိကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ဘီ…
ဟီ ဟိ မနေ့က အုန်းထမင်းနဲ့ အမဲနှပ် ၊ ငါးဘတ်မွှေ ၊ ငါးခူယဲယိုရွက်…
ပုဇွန်ထုပ် ၊ ပြည်ကြီးငါးအစပ်ချက် ၊ တပတ်စာချက်ပြီးကြောင်း…
ဟိုင်နန် ကြက်ဆီထမင်း (သို့) ဒန်ပေါက် ချက်စားရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း…
ဟမ့်… အိမ်ထောင်ကျမှ မနားတမ်းချက်နေရတယ်…
တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ ပြောပေးဦးလေ။
မပြောရင် ဒီ ထက်ဆိုးတဲ့ ဂဇက် လိ(ခ) လာမယ်။
တောက်တိုမယ်ရ ကျောက်လက်ထောက် လုပ်ရ၊ လှီးရချွတ်ရ၊ဆေးရကြောရ၊ စားရတာနဲ့ ကာမိဘူး…
ပြောသားပဲ မိုက်ပြီး ခုန်ချတာကို..အစထဲကယောင်္ကျားပဲ ယူဆိုတာ ကို မိန်းမသွားယူတော့ ထိပြီ…
မားးးးဆွေ ပြောပြောကတော့ မစောဘူး၊ အခုမှ…
ဘာယဲ… မိနှင်းနှင်းနဲ့ ရန်ဖစ်ချင်ရို့လား… ဟီဟိ
ပုံတွေနဲ့တကွ မြင်ရတော့ ဗိုက်တောင်ဆာလာတယ်…ဒီလင်ဒီမယား အိုအောင်မင်းအောင် စားနိုင်ပါဇီ
မိုးလင်းထဲက အိပ်တဲ့ထိအောင် စားဖို့ပါပဲ…
ဟီ ဟိ… ဒါတောင် အခန်းထဲက မုန့် အပုံလိုက်ကို မတွေ့သေးလို့…
အသက် ၁၂၀ ထိ စားနိုင်စေသော်(ဝ)
အိမ်နီးချင်းဖြစ်ရင် ဟင်း လဲစားမယ်လေ မွအိရဲ့…
အိမ်နီးချင်းဖြစ်ရင် ဓာတ်ပုံတင်မယ် မထင်ဘူး မွအိ။
ခုတောင် ဟောင်ကောင် ကို အလုပ်ပြောင်းရမား စဉ်းစားနေတာ၊
ဟင်းချက်ကောင်းတာ နဲ့ မိန်းမကြောက်တာ ဘယ်လိုများ ဆက်စပ်နေလဲ
တစ်ချို့ကျတော့ မိန်းမကို ချစ်တယ် ချစ်တယ်ဆိုပြီး ချက်ကျွေးတာပေါ့နော်။
မမချွိ အထင်ကတော့ မိန်းမကို နေရာမပေးချင်တာမှ ……………….
မီးဖိုချောင် နေရာကိုပါ နေရာမပေးချင်လို့ မောင်ပိုင်စီးထားတယ် မှတ်တာပဲ။
ကြောက် မကြောတ်တော့ မမချွိ မသိဘူးးး
ကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူး… ဂျစ်တာပါ ကိုရင်နိုရယ်…
သူကလေး လျှာရင်းမြက်စေဖို့ စေတနာထားပြီး ချက်တယ်လေ…
ခြေမွှေး လက်မွှေး မီးမလောင်အောင်ထားတာပါ မယ်ချွိရဲ့… အာဟိ
အင်း ဒီလူရီး ဂျစ်တူနားကမခွာဖစ်နေဒါနဲ့ ဒလိုဒမြတိုက်လိုက်သပေါ့လေ။ မီးမကို ချက်ပြုတ်ကျွေးနေရဒါနဲ့ ထမင်းဆိုင်ကို ပစ်ထားတာ။ လျှော်ကြေးတောင်းဘာချွိချွိ။ ဒီတခါပြန်လာရင် တရွာလုံးကို ရှယ်ချက်ကျွေး ဘာလို့
ဇဂါးမစပ် ၀က်တားဒွေနေရာမယ် ကြက်တားဘယ်လိုအစားထိုးရဘာ့။
ကြက်သားကို ဝက်လိုပဲ စီမံပြီး ပေါင်းစားလေ မွသဲရဲ့…
ဒါပေမည့် သကြားတော့ လျှော့ထည့်ပါ…
ကျောက်စ်ကတော့ ကြက်ပေါင်းရင် တရုတ်ဆေးမြစ်စုံနဲ့ပေါင်းတယ်…
ဂျင်ဆင်းပါတော့ အားဖြစ်တာပေါ့… အဟိ
အေးပေါ့လေ လိုဒဲ့တူဒွေတော့ အားဖြစ်အောင်စားသပေါ့လေ ဟေးဟေး။ ဘူမိသမားဆိုတော့ တွင်းတက်တွင်းဆင်းရလို့ဘာ
သွားရည် ကျ သွားတယ်…
နာ လည်း အဲ့ ဟင်း အစားချင်ဆုံးပဲ။
ဂယ်ပြောတာ အဲသည့် ငါးရှဉ့်ဟင်းက အလွန်ကောင်း…
စပ်စပ် ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ လျှာထဲမှာ စွဲသွားမယ်…
အင်းးးး ။ ဟောင်ကောင်မှာ တစ်ပါတ်လောက် သွားနေဦးမှ ။
ဘယ်လိုလဲ ၊ ဦးကျောက်စ် + မ နှင်း ။
လာဖြစ်အောင်သာလာခဲ့ပါ အဘဖောရယ်… ရှယ်ချက်ကျွေးပါ့မယ်
ဂျွန် ဂျူလိုင်လောက် အဘတို့ကျွန်းကြီးပေါ်ကို အလည်လာမလို့…
” ဂျွန် ဂျူလိုင်လောက် အဘတို့ကျွန်းကြီးပေါ်ကို အလည်လာမလို့ ”
ဇွန်လ အထိတော့ သြဇီ မှာ ရှိမယ် ။
ဇူလိုင် ဆိုရင်တော့ ဗမာပြည် ပြန်ဖို့များတယ် ။
မနှင်းတို့.. အူးကျောက်တို့အိမ်ဧည့်သည်သွားလုပ်ရင်… ၁ပတ်လောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူး… ၂ပတ်လောက်သွားမှဖြစ်မယ်.. :loll:
တစ်လလောက်နေလည်း ဘာမှ ပြောပါဘူးတဲ့။
ပြီးမှ နှင်း ခွဲတန်းလျှော့အောင် လုစားကြတာပေါ့။
အဟွတ်… ခွစ်တို့ မမချွိတို့က တကယ်ဝါးတီးဖွင့်ကြမှာဆိုဒေါ့…
ဆန်အိတ် ဆီပုံးနဲ့ ဟင်းစားတွေ ဈေးဝယ်ပြီး လာကြပါရန်… ဟိ
အရဂါးပြောတာ… လာသာလည်… ရှောင်နေမယ်တိလား… အားဟိ
ကျောက်စ်နဲ့ နှင်းနှင်း ရဲ့ ထမင်းစားပုဂံနှစ်ချပ်က ရောင်မတူဘဲ
ဘာလို့ black & white ဖြစ်နေတာလဲ ဒါအသားအရောင်ခွဲခြားမှု့ မြောက်ပါတယ်
ဒါမှမဟုတ် black white ကောင့်ကိုအားကျလို့လား
အရောင်နဲ့ခွဲခြားပြီးစားတယ်ဆိုရင် ဘူက black လဲ….
အဂုတော့ မနိုတို့ သဂျီးတို့ ပြောစရာဖြစ်ပြီ…
အသားအရောင်ခွဲခြားတဲ့ မိနှင်းနှင်းက ကျောက်စ်ကို ပုဂံအနက်တဲ့…
အိမ်ထောင်မကျခင် (ကျမယ်လည်း မထင်လို့) ဝယ်ထားတဲ့ ပုဂံတွေပါခီညာ…
ဘရန်းကတော့ Ikea ပါ… ဟီ ဟိ
နှင်းရေ- စေတနာလား ဝေဒနာလားမသိနိုင်လို့ သတိနဲ့စားနော်။
ကြူ ကြူ သင်းနဲ့ ဧရာဇာတ်လမ်း ကြည့်ဖူးတယ် မဟုတ်လား။
ဆွေဇင်ထိုက်ရဲ့ ပညာပေးဇာတ်လမ်း ‘မင်းမသိသေးပါဘူးကွာ’ အဲ့ဇာတ်လမ်း ..လာတိုင်း သဘောကျလို့ မရိုးတမ်းကြည့်တယ်..ခက်တာက ဦးကျောက်က အဆီပိတ်တာတွေ၊ဆီမြုပ်တာတွေ သူ့မစားခိုင်းလို့ နှင်းနှင်းကို ကျွေးလို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်..အသစ်ကလေး ရှာဖို့ထက် သူ့ပစ်သွားမှာ စိုးရိမ်နေလို့’မင်းမသိသေးပါဘူးကွာ’ အခုထိမဖြစ်သေးဘူး
ဟမ်မယေး… အိမ်ထောင်ကျမှ ၃ထပ်သားလည်းငတ်…
ဝက်ခေါင်းသုပ်ဆို ဝေလာဝေး ၊ အဆီအဆိမ့်ဆို နတ္ထိ…
ကျောက်စ် ဖြစ်အင်ကို မြင်စေချင်တယ်… အရပ်ကတို့ရဲ့
နှင်းအရောင်ဟပ်ပြီး ပိန်သွားပြီး ပိုကြည့်ကောင်းလာတော့ မပြောဘူးးး
ကျောက် – နှင်း ၀က်နားရွက် သုပ်စားရအောင်။ အရမ်းကောင်းတယ်။…… နှင်း- ဟင့်အင်း။ မစားချင်ဘူး။ ပါးစပ်ထဲမှာ ချော်ချော်ထွက်နေတယ်။ မကြိုက်ဘူး။….. ကျောက်- ကောင်းပါတယ် နှင်းရဲ့ စားကြည့်ပါလား။…. နှင်း- စားချင်ဘူး။ ကြိုက်ဘူး။ ကို စားချင်ရင် တစ်ယောက်ထဲ စားလေ။ နှင်း မစားဘူး။….. ကျောက်-ဒါဆိုလည်း ကိုယ် တစ်ယောက်ထဲ မစားတော့ပါဘူး။……အဟိ…မနေ့က ထမင်းဝိုင်းမှာ အပြန်အလှန်ပြောကြတာ..ကျောက် စည်းရုံးရေး မအောင်မြင်ဘူး။ သနားတော့ သနားပါတယ်။
နှင်းထရိန်နင်အောက်မှာ ကျောက်စ်ဗိုက်ပျောက်သွားလို့ ပိုကြည့်ကောင်းလာတာ နှင်းကို ကျေးဇူးတင်လိုက်
ကြုံလို့ပြောရရင်.. ကျောက်စ်မောင်နှံရဲ့ ထမင်းပုဂံဘေးက.. စတီးဇွန်းလေတွေတွေ့လား..
ထိုင်းဆိုင်မှာသွားဝယ်တာတောင်.. အသေးလေးတွေပဲရပြီး..တလောကမှ.. မြန်မာပြည်မှာသုံးနေကျ..ဆိုဒ်အကြီးရတာ..
အဲဒီကုမ္ပဏီ.. ထိုင်းမှာရှိတာ.. အလုပ်သမား..၀န်ထမ်းအများစုကြီးက.. မြန်မာတွေလို့.. ဖတ်ဖူးတယ်…
ဟဲ ဟဲ ။ ဗမာပြည်သားတွေကတော့ ၊
အဲဒီ ဇီးဘရားတံဆိပ် ဟင်းချိုသောက် စတီးဇွန်းလေးတွေ နှင့် အသားကျနေပြီလေ ။
သူတို့နှင့် ခပ်မှဘဲ ဟင်းချိုရည်ကလည်း ပါပေသကိုးဗျ ။
ထမင်းစားပန်ကန်မဟုတ်တဲ့ ပန်းကန်ထဲ ထမင်းထည့်စားနေကြတော့(သေးတော့ ထမင်းနည်းနည်းပဲ စားဖြစ်ကြလို့)
ဗမာပီပီ ဟင်းချိုသောက်ဇွန်းနဲ့မှပဲ အဆင်ပြေတယ်..သူ့ထမင်းစားပန်းကန်ပြဲကြီး(ခေါက်ဆွဲကြော်ထည့်ထားတာ) တွေက မ..ရ၊ဆေးရတာ လေးလွန်းလို့ အသုံးနည်းတယ်
ယိုးဒယားပစ္စည်းက နေရာတကာ ရခဲဘိခြင်းးးးးး
အဲဒါ ဟိုတလောက ယိုးဒယားဈေးက အဲဒီ ဇွန်းဂေါက် (အဲလိုပဲခေါ်တယ်) ဘူး တွေ့လို့ ဝယ်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ သံချေးလိုလို အညှိလိုလို တက်လို့ တဝက်လောက်က ဝဲပလိုက်ရတယ်။
ကိုယ်ကလည်း မွင်းဂါး စားရင် အဲဒီ ဇွန်းနဲ့စားရမှ ဆိုတော့။
ချွိချွိ..အိမ်မှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနည်းလေး ၁၅နှစ်လောက်ကတည်းက ၀ယ်ထားတဲ့ အဲ့ ဇွန်းဂေါက် အသေးရော၊အကြီးရော ဘူးလိုက်တွေ ကောင်းသေးတယ်..အသစ်တွေ ထူပြီး ပြောင်လက်နေတုန်းပဲ..သံချေးလည်း မတက်သေးဘူး..ခုနောက်ပိုင်း က ကွာလတီကျတယ် ထင်တယ်..ဦးကျောက်ကတော့ ဟင်းချိုသောက်ရင် ဇွန်းရှည်ထ်ိပ်ဝိုင်း၊ ထမင်းစားရင် အဲ့ဇွန်းဂေါက်၊ မုန့်လုပ်စားရင် ဇွန်း၊ခက်ရင်း သုံးတယ် :-)
ဒါဆို မြန်မာပြည်ထွက် အမေရိကားက လူတွေကို အဲ့ဒီဇွန်းလေးတွေ လက်ဆောင်ပေးရင် အတော်အလုပ်ဖြစ်မယ် ထင်တယ်
အဲသည့် စတီးဇွန်းတွေက ကျောင်းသားဘဝ ၊ ဝန်ထမ်းဘဝ…
တုံးတယ်လို့ဆိုဆို ၊ တောကျတယ်ပြောပြော… အဲဒါလေးနဲ့မှ…
ဟိ မ.ဆ.လ ခေတ်က ကြွေရည်သုတ်ဇွန်းတွေကို မလွမ်းဘူးလား…
ကျန်တဲ့ ဟင်းချက်နည်းလေး ရေးပေးပါဦးးး
ဒဂျီးနှယ် ဟင်းမကြည့်ပဲ ဇွန်းကြည့်နေတယ် တညျိုးပါလား
ပို့စ်နဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးဗျာ..internet explorer…google chrome…firefox…opera …ဘာတခုနဲ့မှ FBကိုဖွင့်လို့မရဘူး..ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာ…ဆရာသမားတို့…ကူညီပေးကြပါဦး…
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…fire fox မှာတော့ error 504 ဆိုပီးပြထားတယ်ခင်ဗျ…
Error 504 ကို ရှာကြည့်တော့ Server ဘက်ကလို့ တွေ့တာပဲဗျို့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမာဃ…ကျွန်တော်မှားသွားတာပါ..error 502 ပါ….ကွန်ပြူတာအကြောင်းတခုမှမသိပါဘူးခင်ဗျား…သူငယ်တန်းအဆင့်ပါ၊ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တဆင့်ချင်းပြောပြပါလား..အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရင်တော့ sorry ပါခင်ဗျာ…
error 502 ကိုလဲ အဲ့လိုပဲတွေ့တယ်ဗျ။
ဆိုတော့ အရင်ဆုံး browser history ကိုရှင်းကြည့်ပါ
Firefox မှာ Clear recent History ဆိုပြီး ပါပါတယ်။ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားက icon ကိုနှိပ်ပြီးရှာကြည့်ပါ။
အဲ့လိုလုပ်လို့မှ မရရင်တော့ တမင်ပိတ်ထားတယ်လို့ ယူဆမိပါကြောင်း
ဥငေးဆီက ဟင်းစပ် ရချင်ရင် နည်းပေးမယ် ..
အပေါ်မှာ တွေ့လား ..
အဆီအစိမ့်တွေ မစားရလို့ စိတ်ပိန်နေတယ် ပြောထားတယ်
စားလို့ရအောင် တိုက်တွန်းပေးမယ်လို့ ပြောလိုက် ..
ဒါဆို ဟင်းစပ် ရလိမ့်မယ် … ထင် .. တယ် …
အံစရာ ပြောတာ ဟုတ်လားးးး
အာ့ဆို နှင်းကို ရအောင်ပြောပေးမယ်။
နှင်းက မမချွိ စကား နားထောင်တယ်။
d ၁ ခါတော့ ပုံနှင့်တကွ သွားရည်ကျရပီ …